स्तन आर्कषक देखाउन कुन उमेरमा महिलाले कस्तो ब्रा लगाउने ? – Sodhpatra
स्तन आर्कषक देखाउन कुन उमेरमा महिलाले कस्तो ब्रा लगाउने ?
प्रकाशित : ६ बैशाख २०७८, सोमबार २२:२९ April 19, 2021
महिलाको शरीर र सुन्दरतामा स्तनको भुमिका मुख्य हुन्छ । महिलाको शरीर आर्कषक देखाउन स्तनको भुमिका रहने गर्दछ । तर जानअन्जानमा महिलाले प्रयोग गर्ने ब्राका कारणले कतिपय समस्या आउनसक्छ । यस्तोमा कुन उमेरका महिलाले कस्तो ब्रा लगाउँदा स्तन आर्कषक देखिन्छ त ?
१. १८–२५ बर्ष
१८ देखि २५ बर्षको उमेरसम्म महिलाको स्तनको आकार निकै आकर्षक र कसिलो हुन्छ । यो उमेरमा प्रयोग गरिने ब्रा सहि आकार र प्रकारको हुन आवश्यक छ । तसर्थ यो उमेरमा दिउँसो वा वर्किङ टाइममा सपोर्टिव ब्रा पहिरीएमा यसले स्तनको सौन्दर्यलाई कायम राख्दछ । तर व्यायामका समयमा भने स्पोर्टस् ब्रा पहिरिनु पर्दछ ।
२. २५–३५ बर्षपछि
प्रायः २५ देखि ३५ बर्षको उमेरसम्म अधिकाशं महिलाको विवाह हुने र लगभग गर्भवती भइसकेका हुने गर्दछन् । यस्तोमा गर्भाअवस्थाका बेला स्तनको अकार बढद्छ र स्ट्रचे माक्र्स आउँछ । त्यसैले यो उमेरमा हल्का व्यायम गरेर तौललाई नियन्त्रण गरी सर्पोटिभ ब्रा लगाउनु पर्छ । तर स्तनपान गराइरहेका महिलाले भने मेटरिनिटी ब्रा लगाउनुपर्छ ।
३. ३५ वर्षपछि
३५ बर्षपछि उमेर बढेसँगै महिलाको स्तनको आकार र दुध ग्रन्थी पनि सुक्दै जान्छ । यससँगै स्तन सिथिल हुन्छ र झोलिएको देखिन्छ । त्यसैले यो अवस्थामा भने पुशअप ब्रा लगाउनुपर्छ । यसले स्तनलाई कसिलो देखाउँछ । तर स्तनमा दाग वा निलडाम बस्ने गरीको कसिलो ब्रा भने लगाउनु हुदैँन ।
महामारी होस् या बाढी पहिरो, दर्शकले नै ‘स्टार’ बनाएका कलाकारहरू को कहिल्यै मन पग्लिएन !
काँग्रेस उप-सभापति गच्छदारलाई पत्नीशोक !
कामसूत्र अनुसार यी १० गुण भएका पुरुषप्रति स्त्री लोभिन्छन् !
फ्रिजमा राख्न नहुने यी ८ खानेकुरा, यस्तो छ कारण !
सकारात्मक उर्जाका लागि घरमा राख्नुस् यी ५ विरुवा !